Rakkoo Venzuweelaa: Waayit Haawus ''sodaachisuu dippilomaatotaaf deebii kenna' - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoo Venzuweelaa: Waayit Haawus ''sodaachisuu dippilomaatotaaf deebii kenna'
Ameerikaan doorsisa dippilomaatota Ameerikaa fi hoogganaa paartii mormituu Juan Guaidó irratti Veenzuwelaan gaggeessaa jirtuuf ''deebiin'' akka kennamu akeekkachiiste.
Gorsaan Nageenyaa Biyyaalessaa Joon Boltan waan jedhan ''dorsisne akkasii olaantummaa seeraaf arrabsoo is guddaadha''.
Akeekkachiisni kun Yunaayitid Isteetis fi biyyoonni 20 biroo Abba Guaidó yeroof pireezidantii ta'uusaanii erga deeggaran ibsanii, guyyoota muraasaan boodadha.
Manni Murtii Ol-aanaa ittisa imalaa Tiraamp deeggare
Kaanaadaan ambaasaaddara Venezuweelaa biyyaa ariite
Gama biraatiin, Abba Guwaadoon gaafa Roobii fi Sambataa mormii mootummaaf namuu akka bahu waamicha dhiyeessaniiru.
Erga mormitoonni Pireezidant Nikoolaas Maaduroon aangoorraa bu'an dhiibbaa godhuu eegalanii, rakkoon siyaasaa Veenezuweelaa keessaa hammeenya guuddaarra waan gahaa jiru fakkaata.
Pireezidant Maaduroon yeroo aangoo lammaffaaf waadaa kan galan wayita tahu, moormitoonni garuu filannoon yeroo muraasaan dura taasifame kan haatamedha jechuun daran mormaa jiru.
Dilbata, Ameerikaatti bakka bu'aan raayyaa waraanaa Veenezuweelaa, Koloneel Hosee Luwiis Siilvaa (José Luis Silva), mootummaa Abba Maaduroo ganeera jechuun labse. Abba Guwaadoon pireezidantiidha jechuun beekamtii kenne.
Boodarra Abba Booltan Twitter gubbaati olbahuun ejjennoo Waashingitan ibsan. ''Dorsisaa fi jeequmsa'' kamuu fudhatama akka hinqabne akeekkachiisan.
Abba Guwaadoonis Twitter'tti as bahuun gaafa Roobii, mormii 'naga-qabeessa' sa'aatii lamaaf turu, kan mootummaa laamsheessuu irratti xiyyeeffate akka godhamu dhaamsa dabarsan. Gaafa Sambataa ammoo mormiin ''biyyaalessaa fi idil-addunyaa guddaan'' ni taasiafama jedhan.
Hawwan Venezuweelaa daa'imman sooruu dadhabanii guddifachaaf kennan
Maaltu ta'aa jira?
Gaafa Sambataa, Ispeen, Firaans, UK dabalatee biyyoonni Awuroppaa hedduun, yoo filannoon haarawaa guyyoota saddeet keessatti hin taasifamu taanaan, Abba Guwaadoo akka pireezidantiitti beekkamtii akka kennaniif akeekkachiisaniiru.
Abba Maaduroon garuu jecha biyyoota kanneenii kuffisuun, wanti akka ulaagaatti kaa'an kanas kaasuu qabu jedhaniiru.
''Veeneezuweelaan Awurooppaa waliin hidhaminsa tokkollee hinqabdu. Kun waan fudhatama hinqabnedha,'' jechuun CNN Turk'tti guyyaa Dilbataa dubbataniiru.
Ittisa Imalaa Tiraamp: Manni Murtii Ol-aanaa ittisi kun akka guutummaatti hojiirra oolu eyyame
Viidiyoo Hawwan Venzuweelaa daa'imman sooruu dadhabanii guddifachaaf kennan
Biraaziil Dipiloomaatii Veenzuweelaa olaanoo ari'atte